उत्तर कोरियाको चेतावनीःअमेरिकाले भयानक पीडा भोग्छ — Arthatantra.com
Arthatantra.com > प्रवास > उत्तर कोरियाको चेतावनीःअमेरिकाले भयानक पीडा भोग्छ
काठमाडौ । संयुक्त राष्ट्रसंघको नयाँ आर्थिक प्रतिवन्धपछि उत्तर कोरियाले अमेरिकामाथि भयानक पीडा पुर्याउने चेतावनी दिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघमा उत्तर कोरियाका दूतले अमेरिकामाथि राजनीतिक आर्थिक र सैन्य मुकाबलाको विकल्प चुनेको आरोप लगाएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका अनुसार उत्तर कोरियासँग लड्नका लागि जो गर्न सक्यो त्यसको तुलनामा यो प्रतिवन्ध केही पनि होइन । संयुक्त राष्ट्रसंघको नयाँ प्रतिवन्धको उद्देश्य उत्तर कोरियाका लागि तेल निर्यात रोक्नु र उसको हतियार कार्यक्रमका लागि आम्दानी सक्नु हो ।
यसै महिना उत्तर कोरियाले आफ्नो छैंठौ तथा अहिलेसम्मको सवैभन्दा ठूलो परमाणु परीक्षण गरेको थियो । यो प्रतिवन्ध त्यही कामको जवाफमा दिइएको थियो । उत्तर कोरियाका संयुक्त राष्ट्रसंघका दूत हानताए सांगले यसलाई अवैध बताएका छन् ।
जेनेभामा संयुक्त राष्ट्र संघको एक सम्मेलनमा उनले उत्तर कोरिया जे गर्न जादै छ त्यसले अमेरिका ठूलो पीडा मा पर्ने छ जो उसले यसअघि देखेको थिएन भन्दै अमेरिकामाथि चेतावनी दिए । संयुक्त राष्ट्र संघले सर्वसम्मत रुपमा उत्तर कोरिया विरुद्ध नयाँ प्रतिवन्ध पारित गरेको छ ।
तर यो त्यतिखेर सम्भव भएको थियो जतिवेला चीन र रुसको आग्रहमा अमेरिकाले प्रस्तावलाई केही नरम बनाएको थियो । शुरुवातमा उत्तर कोरियाबाट तेल आयातमाथि पूर्ण प्रतिवन्ध लगाउने मस्यौदा तयार गरेका थिए । केही विशेषत्रका अनुसार यस्तो गरेको खण्डमा उत्तर कोरियाको सरकार अस्थिर हुन सक्थ्यो ।
सन २००६ को संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद् उत्तर कोरियाको विरुद्ध नौ प्रस्तावलाई एक मतले मञ्जुरी दिएको छ ।
प्रकाशित मितिः२०७४ भदौ २८
२०७४ भदौ २८ गते १३:३९ मा प्रकाशित
घरेलु तथा साना उद्योगका उत्पादनको गुणस्तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनुपर्ने
सुनको भाउले फेरि बनायो ऐतिहासिक रेकर्ड : मूल्य आकासिएपछि कारोबार ठप्प !
अब नेपालमा पनि बेरोजगारले भत्ता पाउने !
के तपाई पनि डिभी भर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? खुल्यो है !
दुई बैंक मर्जका लागि साधारण बोलाईयो,हेर्नुस् कति छ स्वाप रेसियो ?